Zvuru zvamakumi manonwe makore apfuura kwaiwe ne nyikambiri ndokuputsika dzakanyura pasi pemvura. Nyika dzatoona mazuva ano ndidzo dzakazonyuka chiitiko ichi chapfuura. Vaka kwanisa kurarama pachiitiko ichi vakatanga kupararira nenyika itsva. Vakatanga kurarama kamuraramiro kawo ke kare. Vakatadza kurarama kamuraramiro kavo ke kare vakapararira ne nyika vachienda kure nevamwe kwemakore akavanda.
Kwavaka enda vakanosvika vakatanga hupenyu hutsva vakatanga kuvaka nekushongedza nyika yavo, ndokuisa hutungamiri vaizo tungamirira nyika idzi. Kararamiro kevanhu mazuva ano kano ratidza zviitiko zvasiyana nenguva yekare.
Zvisikwa, zvirimwa nesu vanhu kararamiro kedu kanogadziriswa nekusharwa pazvuru zvamakumi manonwe oga oga. Zvavakuitika mazuva ano kumativi anotonhora enyika, kunyunguduka kwemvura zvavakuratidza kuti nyika yave kusvika kumagumo ayo. Kana mvura yanyunguduka yose, Nyika ichazvishandura kusvika pamongo payo. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti sei pane hupenhu panyika uye sei uchivepo uye uchipera uye se uchizotanga zve patsva, mhinduro isati yawanikwa yechikonzero ichi ndiyo yakakosha kupfura kushanduka kwenyika.
Private site iyi iripo pakuchengetedza ruzivo roupenyu panyika. Muchavana ruzivo rwose rwamunoda mubhuku rinonzi The Divine Order nebhuku rinonzi The Universe rwakapihwa vanhu sechipo ne vanyori varo. Sezvo munhu vese anekodzero yedzidzo rinovanika nyore.